Barnaamijyada Dhalinyarada | Waxbarshada Beesha Minnetonka
Barnaamijyada Dhalinyarada ee Waxbarshada Bulshada ee Minnetonka waxay u adeegaan carruurta laga bilaabo dugsiga barbaarinta illaa dugsiga sare, iskuulka ka hor iyo dugsiga kadib, iyo fiidadka, maalmaha fasaxa ah iyo maalmaha aan iskuulka jirin. Hadafkeenu waa inaan siino fursado ardayda oo dhan si ay u daba galaan damacyadooda, u kobciyaan hibooyinkooda, iyo dhisida xiriiro jawi aamin ah, kobcin leh.
Minnetonka Community Education waxay bixisaa barnaamijyo kaladuwan oo taageero tacliimeed ah si ardayda looga caawiyo inay bartaan shaqadooda waxbarasho, loo wanaajiyo kalsoonidooda iyo inay gaaraan heer sare oo guul ah.
Dugsiga Wadista Wadista ee 'Safeway Driving School' wuxuu abuurayay darawallo ammaan ah, oo mas'uul ka ah in ka badan 35 sano. Iskaashatada Waxbarshada Beesha ee Minnetonka iyo Safeway si ay u bixiyaan fasalo xoojinaya farsamooyinka wadista difaaca.
Carruurta da'doodu tahay 2-18 waxay ka dooran karaan farshaxanka, waxqabadyada 'STEM', sameynta farshaxanka, muusikada, karinta, hoggaaminta dhallinyarada iyo in ka badan si ay u gutaan baahidooda kobcinta.
Sahamiyayaal Daryeelka Carruurta ee Da'da ah
Naadiga sahamiyayaal iyo khubaro sahamiyayaal naadi ah waa tayo sare, oo la aqoonsan yahay barnaamijyada daryeelka caruurta ee wiilasha iyo gabdhaha, da'da dugsiga barbaarinta ilaa fasalka 5aad oo bixiya daryeel kahor iyo kadib iskuulka, maalmaha aan iskuulka aheyn iyo xagaaga.
Ka xusho tilmaamaha gaarka ah ama kooxeed ee biyaano, gitaar, woodwinds, naxaas, xargaha, garaacis, iyo codka jawi dabacsan oo loogu talagalay carruurta iyo dadka waaweyn ee da 'kasta leh.
Waxqabadyo shaqsiyadeed iyo kooxeed kala duwan ayaa la siiyaa si loogu dhiirrigeliyo qaab nololeed firfircoon oo ay ka mid yihiin kubbadda koleyga, qaansoleyda, shiraaca, teniska, fuulitaanka fardaha, t-ball, kubbadda cagta ee carruurta da'doodu tahay 2-18.
Minnetonka Community Education waxay soo dhaweyneysaa milkiilaha Dance Endeavors, Juli Michelson, inay hogaamiso barnaamijkeena qoob ka ciyaarka ee bixiya balet, tub, jazz, hip hop fasalo iyo inbadan.